Cishe wonke amadolobha amakhulu European has a Museum of Erotica. Barcelona, Amsterdam, Berlin - ungathola eziningi izinhlangano ezinjalo kulezi dolobha. Bonke abizwa ngokuthi "ubulili Museum" ngonyaka ukuletha eziningi cash. Zimbalwa izivakashi ngokuvakashela le mizi, senqabe bezobuka amahholo kwezikhungo ezifana.
Ngokomlando, Museum lokuqala esikisela ucansi lavulwa ngo Naples ngo-1819. Lalibizwa ngokuthi Imfihlo weKhabhinethi wangomhla zingama-eNational Museum of Archaeology eNaples. Njengoba ingxenye enkulu yomsebenzi ziphephile ezazisezinyaweni lokhu embukisweni, kutholakele phakathi bemba emadolobheni abadumile - yasePompeii naseHerculaneum. Izivakashi bakwazi ukuzibona 2000 kuphela. ungabona eziningi ziphephile namanzi Museum: isithombe ngokuqukethwe zocansi, eziqoshiwe kanye nezinye izinto eziningi ucansi.
EHolland zikhona amaningi njengoba ezimbili Museum efanayo. Omunye wabo itholakala enkabeni yedolobha phezu eyaziwa kahle emgwaqweni okubomvu okukhanyayo wesifunda, futhi elinye eduze Damrak e-Amsterdam. Kuyinto Museum of Erotica ngokuthi "Temple of Venus" yesibili iqoqa ngonyaka izivakashi ezingaba anamakhulu mahlanu amawaka. Kulesi sakhiwo kukhona ithuba ukubona umsebenzi okhokhelwayo njengoPetru Fendi, okuyinto okuyinhloko odumile izigcawu zangasese. Futhi okudume phakathi izivakashi embukisweni enesihloko esithi "Ukuya Ocansini kuyo yonke le minyaka." Qhubeka naye kwi zobulili ezidumile mlando. Kodwa impumelelo enkulu phakathi izivakashi, yebo, iqoqo Erotica Dutch, okuyinto kuphawuleka for progressiveness yayo.
Copenhagen Museum esikisela ucansi yaqale wavula ngo 1992. Yena waqala e Museum emhlabeni, okuyinto uqale ukuboniswa isiqophi kokuqukethwe efanele. Futhi kulesi sakhiwo ungabona yokuchayeka i nature zocansi, wahlela ngokulandelana kwezenzakalo, kusukela ezikhathini yamaRoma ukuzenza uthandwe ngokunikela yesimanje. Lezi zobuciko bayakwazi tshela izivakashi nge ukuthuthukiswa, okuyinto wahlupheka emhlabeni zangasese. Ngaphezu kwalokho, Museum inhlokodolobha Denmark kuyinto zobuciko atholakalayo, okungase usitshele ukuphila kwabantu abadumile - ngokwesibonelo, umbhali Hans Christian Andersen, umculi nomlingisikazi Marilyn Monroe kwengqondo Freud sasho.
Museum elikhulu Erotica Berlin. Wayelethwa ogama lakhe behlonipha abashayeli Beate Uhse. UBooysen wakwazi ukusho ukuthi ngibe usaziwayo hhayi kuphela indiza yayo, kodwa ukuthi ngemva kwempi, ihlelwe inkampani yokuqala waziphatha ukudayiswa movie nokuqukethwe zangasese. Ziphephile evezwa Museum, bayakwazi ukukhuluma mayelana nokuthuthukiswa Ukuvusela cishe kuwo wonke amazwe emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, isivakashi ababeqonda ukuthi kwakwenzekani enkundleni, umnyuziyamu olwenziwa ekuboniseni izimakethe thematic okuqukethwe obuseduze. Phela, ngisho nalabo izivakashi abanokuhlangenwe umcabango omuhle, ngokuvamile kunzima ukuqonda okushiwo ziphephile ezithile.
Ekupheleni 1997 kanti eFrance kwakukhona Museum of Erotica. Paris - futhi kulapha lapho usebenza, embukisweni - kanye namanye amazwe emhlabeni isinqumo, sokuthi kufundiswe izakhamizi endaweni yobuciko zangasese. Esikhathini Museum zikhona amakamelo eziyisikhombisa, okwabonisa ezihlukahlukene zobuciko kobulili ehambisana ne-izenzakalo ezinkulu eYurophu. Ngokwesibonelo, ngesikhathi lapho bedlula football ubuqhawe, kwaba oyisibonelo ibhola phakathi nemibukiso Museum.
Tour Operator "version" imise ukusebenza. Kwenzeka kanjani?
Indlela yokwenza ntambo ekhaya